Waa maxay beerta qaranka: sifooyinka iyo muhiimadda | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
Waa maxay beerta qaranka
Jarmal Portillo | 21/04/2022 12:00 | Deegaanka
Dabeecaddu waxay u baahan tahay nidaam ilaalin oo sharcigu ilaaliyo si loo ilaaliyo flora iyo fauna. Meelo dabiici ah oo la ilaaliyo ayaa tan u jira. Xaaladdan oo kale, aan aragno waa maxay beerta qaranka. Tani waa qayb ilaalineed oo cadaalad ah oo aad u saraysa oo xaddidaysa hawlaha bani'aadamka qaarkood ee agagaarka agagaarka.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa waxa uu yahay beerta qaranka, sifooyinka iyo muhiimada ay leedahay.
1 Waa maxay beerta qaranka
2 Hawlaha beerta qaranka
3 Ahmiyada Seerayaasha Qaranka
4 Astaamaha Seerayaasha Qaranka
5 Shuruudaha qaybta
6 taariikhda beerta qaranka
Marka si adag loo hadlo, waa goobo la ilaaliyo oo leh maqaam sharci iyo sharci ah oo lagu go'aamiyo shuruucda dalka ay ku yaalaan. Xaaladan waxay u baahan tahay ilaalinta iyo ilaalinta dhirta iyo duunyada qani ku ah iyo qaar ka mid ah sifooyinkooda gaarka ah, kuwaas oo inta badan ah goobo waaweyn oo bannaan oo xaddidaya dhaqdhaqaaqa dadka. Sababtoo ah ujeedadu waa in la ilaaliyo, la ilaaliyo lagana hortago sii xumaanaya nidaamka deegaanka ee ku nool meelahaas, iyo sifooyinka siinaya aqoonsiga. Si jiilalka danbe ay ugu raaxaystaan ​​meelahan.
Hawlaha beerta qaranka
Qodobada soo socdaa waxay muujinayaan muhiimadda ay leedahay shaqooyinka seerayaasha qaranku leeyihiin, waana sababta ay dawladdu u shaqeyso wuxuu qaatay go'aano sharci ah si uu u ilaaliyo.
Ilaalinta kala duwanaanshaha noolaha iyo nidaamka deegaanka
Ilaali meelaha khatarta ah
Ballanqaadka kala duwanaanta dhaqanka
Ilaali flora iyo xayawaanka dabar go'aya
Ilaali deegaan dabiici ah oo gaar ah
Ilaali xaaladaha cilmi-baarista ugu habboon
Ilaalinta iyo ilaalinta meelaha paleontological
Ilaalinta iyo ilaalinta seeraha godad
Ka fogow ka ganacsiga sharci darrada ah ee noocyada
Ka fogow horumarka xad dhaafka ah
Ahmiyada Seerayaasha Qaranka
Ahmiyada seeraha qaranku waxay ka koobnaan kartaa ilaalinta iyo ilaalinta deegaanadeeda iyo hab-nololeedkeeda ama sifooyinka gaarka ah ee flora iyo fauna. Waxay wax weyn ku kordhiyaan dheellitirka noolaha, maadaama ay ujeedadoodu tahay inay ilaaliyaan noocyada dhirta iyo xayawaanka kuwaas oo ah kuwo caadi ah ama u gaar ah meelahan. Laakiin waxaa jira mudnaan dhaqaale oo kale, xitaa qaran, oo aan arki doono dhawaan.
Jiilka dakhliga: Maalin kasta waxay u soo qaataan lacag badan wadamada fikrado ay ka mid yihiin dalxiiska iyo hawlaha tacaburka, meelaha kaamamka, fuulitaanka buuraha iyo qaar kale.
Abuur kheyraad dabiici ah oo dib loo cusboonaysiin karo: Jardiinooyin badan oo qaranku waxay leeyihiin awood aad u weyn oo laga heli karo kheyraad dib loo cusboonaysiin karo, oo ay ku jiraan wax soo saarka biyaha iyo alwaaxyada, wax soo saarkoodana waa la xakameynayaa.
Ilaalinta kheyraadka dabiiciga ahNoocyadan meelaha la ilaaliyo waxay u janjeeraan inay siiyaan xasilloonida cimilada qayb badan oo ka mid ah dadweynaha adduunka, taas oo gacan ka geysata xasilinta cimilada, ciidda iyo qaar ka mid ah saamaynta masiibooyinka dabiiciga ah ee suurtagalka ah.
Sida aan soo aragnay, muhiimadda ay leeyihiin seerayaasha dabiiciga ah ee la ilaaliyo ayaa gabi ahaanba lama huraan u ah oo lama huraan u ah jiritaanka qaranka iyo guud ahaan adduunka, iyo sidoo kale meeraheena.
Inkasta oo ururka adduunku uu dadaal badan u galay ilaalinta aagagga dabiiciga ah, waxa uu wajahayaa khataro aad u weyn. Tiro badan oo duurjoog ah ayaa ku sugan xaalad nugul, iyo waxaa lagu qiyaasaa in boqolkiiba 50 ay meesha ka baxeen 40-kii sano ee la soo dhaafay, oo ay ugu wacan tahay ka ganacsiga sharci darrada ah iyo ka faa'iidaysiga xad dhaafka ah.
Astaamaha Seerayaasha Qaranka
Beerta qaranka waa in ay ka kooban tahay sifooyin gaar ah si loogu tixgeliyo beerta qaranka, waa in ay leedahay qiimo dabiici ah oo sarreeya, sifooyin gaar ah iyo gooni gooni ah oo ka mid ah flora iyo fauna. Waa in ay dawladda ka hesho fiiro gaar ah iyo daryeel gaar ah.
In lagu dhawaaqo seer qaran ama kayd qaran, waa in uu ka kooban yahay nidaam dabiici ah oo wakiil ah. Aag weyn oo u oggolaanaya horumarinta dabiiciga ah ee hababka deegaanka iyo faragelinta yar ee bini'aadamka ee qiimaha dabiiciga ah, markaa muhiimadda ay leedahay in la ogaado waxa beerta qaranku yahay si loo siiyo diiradda ku habboon.
Waxay si isdaba joog ah u ahaayeen saldhigii ugu dambeeyay ee noocyada dabar-go'aya. Waxay qani ku yihiin flora iyo fauna waxayna sidoo kale leeyihiin qaabab juquraafi oo gaar ah. Waa inay ogolaato dheelitirka dabiiciga ah ee nolosha sida ay asal ahaan ka jirtay meeraheena. Ujeedada qaar badan oo ka mid ah jardiinooyinkan ayaa ah in la ilaaliyo duurjoogta iyo abuurista meelo dalxiis, iyo dalxiiska ayaa ku dhashay fikraddan.
Aag ama dhul lagu tixgalinayo gudaha beerta qaranka, waa in ay lahaataa qaar ka mid ah sifooyinka soo socda, kuwaas oo ay tahay in la caddeeyo maadaama ay ku kala duwanaan karaan shuruucda ama qawaaniinta wadamada qaarkood:
Matalaadda: Waxay ka dhigan tahay nidaamka dabiiciga ah ee ay ka tirsan tahay.
Ballaarinta: Hayso dusha sare oo ku filan si ay u ogolaato horumarkeeda dabiiciga ah, ilaalinta dabeecadeeda iyo hubinta shaqeynta hababka deegaanka ee hadda jira.
Xaaladda ilaalinta: Xaaladaha dabiiciga ah iyo hawlaha deegaanka ayaa inta badan u badan. Faragelinta bini'aadamka ee qiimaheeda waa inay ahaataa mid yar.
Joogitaanka dhuleed: Marka laga reebo waxyaabo la aqbali karo, dhulku waa inuu noqdaa mid iskuxiran, oo xor ah oo aan lahayn meelo kala qaybsanaan ah oo khalkhal galinaya wada noolaanshaha deegaanka.
Degsiimooyinka aadanaha: Xarumaha magaalooyinka la deggan yahay waa laga saaray, iyada oo laga reebayo cudurdaar.
Ilaalinta sharciga: waa in lagu ilaaliyo shuruucda iyo qaab-dhismeedka sharci ee dalkaaga
Awoodda farsamada: Hayso shaqaalaha iyo miisaaniyada si ay u daboolaan yoolalka ilaalinta iyo ilaalinta, oo kaliya u oggolow cilmi-baarista, waxbarashada ama waxqabadka qaddarinta quruxda.
Ilaalinta dibadda: Waxaa ku hareeraysan dhul lagu dhawaaqi karo kayd shisheeye.
Jardiinooyinka qaranka waxaa inta badan ilaaliya ilaalada seeraha si ay uga hortagaan falalka sharci darrada ah sida ka faa'iidaysiga noocyada ama ka ganacsiga sharci darrada ah. Qaar ka mid ah seerayaasha qaranku waxay noqon karaan dhul ballaaran, laakiin sidoo kale waxaa jira meelo badan oo biyo ah, ama badda dhexdeeda ama dhulka ku dhex dhaca seerayaasha qaranka. Waxaa jira tusaalooyin badan oo noocaas ah adduunka.
taariikhda beerta qaranka
Inkasta oo aysan ahayn fikradda sida aan maanta u naqaanno, waxaa jira diiwaannada kaydka dabiiciga ah ee xitaa da'da weyn ee Aasiya, oo ay tusaale u tahay kaynta Sinharaja ee Sri Lanka, kaas oo waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay in ay tahay UNESCO World Heritage Site 1988 ka hor.
Ma ahayn ilaa 1871, iyadoo la abuuray Beerta Qaranka ee Yellowstone ee Wyoming, in beerta ugu horeysa ee qaranka ay si rasmi ah u dhalatay. Tusaale ahaan, Beerta Yosemite waxaa la sameeyay 1890-kii, isla dalka Mareykanka.
Yurub dhexdeeda fikradda jardiinooyinka qaranka lagama hirgelin ilaa 1909, markaasoo Iswiidhan soo saartay sharci u oggolaanaya ilaalinta sagaal goobood oo dabiici ah oo waaweyn. Isbaanishka waxay taageeri doontaa samaynta jardiinooyinka qaranka iyo 1918 waxay abuurtay beerta qaran ee ugu horeysay, Beerta Qaranka ee Buuraha Yurub.
Waqtigan xaadirka ah qof kastaa wuu cad yahay waxa ay yihiin jardiinooyinka qaranku iyo waxa shaqadooda ay yihiin, waxaa jira jardiinooyin qaran, kuwaas oo Latin America ku nool qiyaastii rubuc ka mid ah dhulka, sida Kaydka Maya Biosphere ee Guatemala, xitaa Pegaso ee Argentina Rito Moreno Glacier National Beerta.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto waxa uu yahay beerta qaranka, sifooyinka iyo muhiimada ay leedahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Waa maxay beerta qaranka
Joogteynta: alaabada lagu badbaadiyo tamarta, biyaha iyo alaabta ceeriin